people Nepal » विश्वका पाँच चर्चित कम्पनीको चकित पारिदिने कमाई ! विश्वका पाँच चर्चित कम्पनीको चकित पारिदिने कमाई ! – people Nepal
विश्वका पाँच चर्चित कम्पनीको चकित पारिदिने कमाई !
के तपाईंलाई थाहा छ, संसारका ठूला कम्पनीले १ सेकेन्डमा कति कमाई गर्दछन् ? आज हामी तपाईंलाई फेसबुक, गुगललगायतका पाँच कम्पनीले हरेक सेकेन्ड कति कमाई गर्छन् भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौं ।
संसारभरी फेसबुकका दुई अर्बभन्दा बढि प्रयोगतकर्ता छन् । फेसबुक एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको स्टार्टअप थियो जसले आज अरबौंको कमाई गरिरहेको छ । फेसबुकको प्रतिसेकेन्ड कमाई ८१ डलर हो अर्थात् ८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढिको कमाई गर्दछ ।
यो सूचीको चौथो स्थानमा गूगल छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन गूगलको कमाई ६ सय ५८ डलर अर्थात् ६७ हजार रुपैयाँभन्दा बढि रहेको छ ।
सूचीको तेस्रो स्थानमा अमेरिकाको कम्पनी माइक्रोसफ्ट रहेको छ । माइक्रोसफ्ट संसारभरी आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम सप्लाई गर्दछ । माइक्रोसफ्टको प्रति सेकेन्ड कमाई १ हजार १ सय ७० डलर हो अर्थात् १ लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँ ।
शीर्ष पाँचको सूचीमा एक मात्र गैर अमेरिकी कम्पनी रहेको छ – सामसङ । दक्षिण कोरियाली यो कम्पनी मोबाइल फोन, होम अप्लाइन्स, फ्रिज, वासिङ मेसिन आदि बनाउनुका साथै डिफेन्स सेक्टरका लागि पनि काम गर्दछ । केही समय अघि सामसङले भारतको टाटासँग तोप बनाउने सम्झौता गरेको छ । सामसङको प्रति सेकेन्डको कमाई १ हजार ६ सय ४० डलर रहेको छ जुन नेपाली रुपैयाँ १ लाख ६९ हजार रहेको छ ।
सूचीको पहिलो स्थानमा अमेरिकाको चर्चित कम्पनी एप्पल रहेको छ । एप्पल संसारभरी आइफोन र म्याक अपरेटिङ सिस्टम सप्लाई गर्दछ । यो कम्पनीको उत्पादन आफैंमा निकै विशेष हुने गर्दछ । कम्पनीको प्रति सेकेन्ड कमाई १ हजार ९ सय ९७ डलर रहेको छ जुन २ लाख रुपैयाँ बढि ।